Aphasia: chii uye chii chinogona kuitwa | Kudzidziswa Kwekuziva
Yakapedzisira kugadziridzwa: Gumiguru 8, 2020
Aphasia chirwere chekutaura inokonzerwa nekukuvara kwehuropi (kazhinji hafu yekuruboshwe).
Iko kukuvara kunogona kuve kunokonzerwa ne:
Panyaya yekurohwa uye kukuvara mumusoro, dambudziko remutauro rinomuka nekukasira. Rudzi uye kuomarara kwedambudziko, zvisinei, zvinoenderana nenzvimbo yakakanganiswa. Muchokwadi, dzimwe kana dzese dzinotevera nzvimbo dzinogona kukanganiswa:
Kunzwisisa mutauro (kugona kunzwisisa izvo zvinotaurwa)
Kugadzirwa kwemitauro (kunetsa kutaura mazwi kana kugadzira mitsara)
Mhedzisiro yacho ndeyekuti kune akati wandei kuratidzwa kweaphasia. Vamwe vanhu vanogona chete kutaura mashoma mazwi; vamwe vanotaura zvakawanda, asi vanowanzoita zvikanganiso kana kutogadzira mazwi, vamwewo vanotaura zvinyoronyoro asi vanomira kutsvaga mazwi, sekunge vaive navo pamuromo weirimi asi vasingavawani.
Mhedzisiro yemunhu uye yemhuri
Migumisiro yeaphasia zvinowanzoomera zvakanyanya kubata zvese kune munhu anenge abatanidzwa (ndiani asingachanzwisise zvavanotaura kana kusakwanisa kutaura zvaanofunga), uye nenhengo dzemhuri dzinoomerwa nekuedza kunzwisisa izvo munhu wepasiki zvinoreva. Uyezve, aphasia inowanzo sangana nekuoma kana kutadza kufambisa ruoko rwerudyi uye / kana gumbo, nekuwedzera kwakanyanya kwekugutsikana kwemunhu. Basa rakakosha rekutsigira munhu aphasic uye nhengo yemhuri inoitwa naA.IT.A. (Italian Aphasic Associations).
Aphasiasi ese akafanana here?
Kwete. Kubva pane nzvimbo yechironda uye, pamusoro pezvose, pamhedzisiro yekushanda, isu tine mhando dzakasiyana dzeaphasia.
Le inoyerera aphasias ndeavo apo murwere anokwanisa kuburitsa mitsara yehurefu hwakafanira, kazhinji kunyangwe kutaura chaiko. Zvisinei, dzimwe nguva vanokundikana kubatanidza mitsara kana kuburitsa mazwi asina kukodzera (paraphasia) kana akaumbwa zvakakwana (neologisms uye jargos).
Anonzwisisika aphasias akapatsanurwa kuita:
Wernicke's aphasia: mutauro unoratidzika kunge wakarurama mukutsetsenura uye prosody, kazhinji kuwandisa uye kutaura, asi muchokwadi haina chinhu mune zvirimo nemashoko asina kukodzera kana asinganzwisisike. Kunzwisisa kunowanzo kukanganisika uye izvo zvinonzi anosognosia zvinowanzoitika, i.e. murwere haazive dambudziko rake. Kudzokorora uye kutumidza mazita zvinokanganiswa.
Kuitisa aphasia: ndeimwe yeatatu disconnection aphasias (mune ino kesi, yeiyo arched fascicle). Kunzwisisa kunochengetedzwa, nepo kudzokororwa uye kutumidzwa mazita kuchidzika sekuwedzera kwekusimudzira. Murwere anonetseka kutsvaga mazwi, anoita zvikanganiso zvine chekuita nekutinhira kwemazwi (phonetic paraphasias) uye kazhinji ane prosody yakachinjwa.
Anomic aphasia: l 'anomie, kana kunetsekana kana kutadza kutumidza izwi, ndizvo zvinowanzoitika mhedzisiro yeaphasia; mune ino kesi, murwere anogona kuve neakajairwa kutaura, kudzamara azvisunungura pachayo pamberi peshoko raasingakwanise kurangarira. Kune akatiwandei matekiniki anovavarira chaizvo pakurapa anomalies.
Inonzwisisika transcortical aphasia: ndeimwe yeakaganhurwa aphasias (mune ino nyaya kubviswa kwepakati pemifananidzo yekunzwika kwemazwi kubva kuchimiro chekumiririra). Tinogona kuzvitsanangura seWernicke aphasia, asi nekudzokororwa kwakasimbiswa. Kazhinji inopa chinoitika che echolalia, ndiko kuti, murwere anodzokorora mazwi ekupedzisira emupinduri.
Zvakare, mune iyo vasiri-fluas aphasias, mutauro unogadzirwa neyakaomarara, kazhinji pane kumbomira uye shanduko yeprosody.
Asiri-kuyerera aphasias ndeaya:
Broca's aphasia: kunyangwe nekunzwisisa kwakanaka (zvirinani kudzamara mitsara yaita yakaoma kunzwisisa), kugadzirwa kunononoka uye kwakaoma; kazhinji kune inertia yemazwi. Iwo mutauro telegraphic uye unowanzo svetuka zvinyorwa uye functors (agrammatism). Chigadzirwa chakanyorwa chinowanzo fanika nekugadzirwa kwemuromo.
Motokari inopfuura aphasia: ndiyo yekupedzisira yeatatu disconnection aphasias (mune ino nyaya kubviswa kweyepfungwa ruzivo nzvimbo kubva kumota yemufananidzo nzvimbo yemazwi).
Global aphasia: zvirokwazvo ndiyo fomu yakakomba. Matauriro otomatiki (kuverenga, mazuva evhiki, mwedzi yegore) anogona kuchengetedzwa, asi zvimwe zvese zvinokanganiswa, kazhinji zvakanyanya. Mazwi echirevo anowanzo kuwanikwa, kunyanya mazwi uye mazwi anoshandiswa semhinduro uye kupindirana mune chero mamiriro.
Munhu wepasic anovandudza here nekufamba kwenguva?
Mune vanhu vazhinji, mumwedzi yekutanga izvo zvinonzi "kuzvidzora kwekuvandudza" kunoitika. Kupora, kunyangwe ichinonoka, inobvumidzwa nekugona kwehuropi kuzvigadzirisa pachako. Mushure memwedzi mishoma mufananidzo unomira. Kazhinji munhu anowanzoita zvikanganiso zvishoma (kudzikisira paraphasias) asi kuti abatwe zvakanyanya (kuwedzera kwenyaya). Panguva ino, vazhinji vaasasic vanodzidza kushandisa dzimwe nzira (semaoko) kudzorera dambudziko ravo remitauro.
Kutaura kurapa kurapwa kunoshanda chero zvikaitika kwenguva yakareba zvakakwana uye kudzamara pakunatsiridzwa kunogona kunyorwa. Izvo parizvino inoonekwa seyega yekunze kupindira iyo inokanganisa kuvandudzwa kwe aphasic kusagadzikana.
Maitiro ekutaura nemunhu aphasic
zvimwe matipi ekutaura nemunhu aphasic:
Mira pamberi pake, umufonere, utarisana naye
Bvunza mibvunzo "yakavharwa" (semuenzaniso, pachinzvimbo chekuti "Unodei pakudya kwemanheru?", Bvunza "Unofarira nyama here kana hove?")
Zivisa kana musoro wehurukuro uchinja
Bvunza mibvunzo yakapfupi uye yakapusa
Teerera pazviri, dzivisa "kuisa izwi mumuromo" kune munhu aphasic anoedza kuzvitsanangura
Zvishandiso zvedu pane aphasia
Zvezvinyorwa zvinyorwa nezve aphasia iwe unogona kushanyira dura redu.
Zvinhu zvedu zvemahara pane aphasia
Chii chinonzi CIAT kurapwa kweaphasia
Masosi anobatsira uye magwaro
Iyo yakasununguka yeAphasia (Dr. Anna Basso)
A.IT.A. Italian Aphasic Masangano
Nhungamiro pamataurirwo ekurapa kwekutonga kwemukuru aphasic murwere (Italian Speech Therapists Federation)
Aphasology: Kliniki kuongorora uye kurapwa (Franco Angeli, 2019)
Kudzoreredzwa kwemunhu ane aphasia (Carrocci, 2013)
Kuziva nekudzidzisazve aphasia (Iyo sainzi kufunga, 2009)
Pragmatic nzira dzekurapa aphasia: kubva kumhando dzemhando kune iyo PACE nzira (Springer, 2002)
Aphasia: chii uye chii chingaitwa2017-06-162021-03-31http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngKudzidziswa kwekuzivahttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/07/311863950_4a0b632e8b_z.jpg200px200px
Aphasia, mahwendefa uye kurapa patsva: ngatitorei stockAphasia, Neuropsychology, New Technologies